विशेष बाजुरामा कांग्रेस कार्यक्रतामाथि आक्रमण, ४ जना घाइते
Ujyaalo शनिवार, मंसिर ९, २०७४ ०६:५८:००
बाजुरा, मंसिर ८– बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. १ मा बिहीबार बेलुका मौन अवधि सुरु हुनै लाग्दा प्रचार गरिरहेका नेपाली कांग्रेस कार्यकर्तामाथि नचिनेका मानिसले आक्रमण गरेका छन् । आक्रमणमा परी कांग्रेसका ४ जना घाइते भएका छन् ।
आक्रमणबाट बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. १ का कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा सदस्य ललित थापा, नेपाल शिक्षक संघ बुढीगंगा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष कृष्ण थापा, अम्म थापा, गोरे सनाई, मदन सनाई घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुराले जनाएको छ । घाइते सबैको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा उपचार भइरहेको छ ।
साढे आठ बजेतिर घरदैलो अभियान गर्दै प्रचार गरिरहेका बेला बुढीगंगा वडा नम्बर १ को धुरालसैनमा नचिनेका मानिसको समूहबाट कांग्रेस कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टले बताएका छन् । घाइतेमध्ये अम्म थापा र कृष्ण थापाको टाउको, हात, पिठ्युँमा गम्भीर चोट लागेको छ । अरु भने सामान्य घाइते भएकोप्रहरीले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस बाजुराले भने आफ्ना कार्यकर्तालाई सुनियोजित तरिकाले आक्रमण वाम गठबन्धनले गरेको आरोप लगाएको छ । तर वाम गठबन्धनले भने यो घटनामा आफ्ना कार्यकर्ता संलग्न नभएको बताएको छ । प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टका अनुसार कसले आक्रमण गरेको पहिचान नभएको र प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको बताएको छ ।
गाउँ नजिकै जङ्गलमा भएकाले कसले गरेको थाहा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार कविराज पण्डितलगायतको टोली धुरालसैन गाउँमा प्रचारमा थियो । त्यही प्रचारमा सहभागी भएर घरदैलोमा जाने बेला आक्रमण भएको थियो । चुनाव नजिकिँदै जाँदा बाजुरामा गाउँमा झडपका घटना बढदै गएका छन् । बाजुरा जिल्ला देशकै अति संवेदनशील जिल्लाका रुपमा रहेको छ ।
सहज रुपमा मतदान गर्ने र कुनै किसिमको घटना घट्न नदिने व्यापक सुरक्षा परिचालन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र एमालेको दोहोरो झडपमा परी बाजुरामा एक जनाको ज्यान गएको थियो ।